> Resource > Video > Liiska Online Video converters
Sababaha ugu weyn ee u baahan in la isticmaalo Converter video ah waxaa ka mid ah sababo la xiriira incompatibilities qaab faylka ama ujeedooyin riixo. Waa sahlan oo anfacaya in ay isticmaalaan ah video Converter online marka loo eego codsiga desktop ah sida software qaar ka mid ah waxa kaliya ee loogu tala galay nidaamka qalliinka gaar ah. Waxaa sidoo kale waa hab aad u sahlan ee diinta aad videos marka ay timaado in la isticmaalayo video ah Converter online.
Waxaad nuqul ka karaa iyo paste aad video URLs ama si fudud dhirtuba aad fayl deegaanka si ay u geliyaan faylasha aad. Si kastaba ha ahaatee, waxay ku xiran tahay video baahidaada; waxaa laga yaabaa in ay adag tahay in la helo Converter habboon ama xaq u online. Sidaa awgeed, waxaan sameeyay liiska Si laguugu sahlo ku salaysan kala duwan ee ay taageerayaan qaabab video. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa la xidhiidha internetka.
Liiska Online Video converters
Magaca Habka raacitaanka Qaabab Input-taageero Qaabab Output-taageero
File Jiid iyo hoos u dhac
URL Copy iyo Jinka
File Upload Aan ku xusan
ASF AVI FLV MOV MPEG Mpg dhexena waxa Jabbuuti wmv
Aan ku xusan
DivX 3GP MPEG MOV FLV iPhone iPod Touch iPod Nano iPod Classic iPod 5G More
Sida lagu muujiyey shaxda sare ku xusan, waxaad ka heli doontaa qaar ka mid ah qaabab video la mid ah oo ay taageerayaan dhammaan online video converters talinayaa sida AVI, 3GP, MP4, FLV, wmv iyo iwm Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u baahan tahay si loogu badalo aad videos la goobaha dheeraad ah ama inay qaab saarka in ay ku gooshayso liiska waafaqsan kuwa ay bixiyaan online video converters ku ah, aad rabto in laga yaabo in ay isku dayaan xal desktop ah.
Codsiga desktop A macnaheedu waxa weeye in aad u baahan tahay si loo soo dajiyo software ka hor inta aadan badalo kartaa videos laakiin dhinaca daray, aad beddelid kartid videos ku yaalla halkii ay mid mid. Waxaa intaa dheer in, ka Converter Video Ultimate sidoo kale waa u download gal midkood Windows ama Mac PC ka hawlgala. Liiska qaabab wax soo saarka oo ay taageerayaan yahay baahnayn in la yidhaahdo daal badan iyo ka buuxaan dheeraad video goobaha ee ku raaxaysateen.